सञ्जय दत्तलाई भएको फोक्सो क्यान्सर के हो, कसरी थाहा पाउने र फोक्सोलाई बचाउने ? सञ्जय दत्तलाई भएको फोक्सो क्यान्सर के हो, कसरी थाहा पाउने र फोक्सोलाई बचाउने ? Canada Nepal
रोहित शर्मा श्रावण २८ २०७७
काठमाडौँ। बलिउड अभिनेतालाई सञ्जय दत्तलाई फोक्साको क्यान्सर भएको छ । छातीमा दुख्ने र श्वास फेर्न गाह्रो भएपछि अस्पताल भर्ना भएका उनलाई फोक्सोको क्यान्सर भएको पुष्टि भएको हो । अस्पताल भर्ना भएपछि गरिएको परीक्षणमा उनी तेस्रो चरणको फोक्सो क्यान्सरबाट पीडित भएको पुष्टि भएको हो । उनले ११ अगस्टमा आफुमा फोक्सोको क्यान्सर भएको सामाजिक संजाल इन्स्टाग्राम मार्फत जानकारी दिएका हुन्।
सञ्जय दत्त उपचारका अमेरिका जाने भएका छन्। फोक्सोको क्यान्सर के हो ? फोक्सोको क्यान्सर एक प्रकारको क्यान्सर नै हो, जुन फोक्सोलाई असर गर्छ । र बेलैमा उपचार नभएमा फोक्सोबाट सुरु भई दिमाग, मिर्गौला, हड्डी र कलेजोमा क्यान्सर सर्ने गर्दछ। छातीमा अवस्थित फोक्सो दुई स्पञ्जी अंगहरू हुन्, जसले श्वास लिँदा अक्सिजनलाई भित्र लिन्छ भने श्वास बाहिर निकाल्दा कार्बन डाइअक्साइडलाई बाहिरी वातावरणमा छोड्ने गर्छ।
एक अध्ययनअनुसार विश्वभर प्रत्येक वर्ष फोक्सोको क्यान्सरका ६७ हजार नयाँ घटनाहरु देखापर्दछन्। जसमा पुरुष र महिला दुबै संलग्न छन्। यसैगरी, धुमपान र मध्यपान गर्ने मानिसमा फोक्सोको क्यान्सर हुने जोखिम बढी हुने गर्दछ। यद्यपि, फोक्सोको क्यान्सर ती व्यक्तिहरूमा पनि हुन सक्छ, जो कहिल्यै पनि धुमपान र मध्यपान गर्दैनन् । तर यिनीहरुमा जोखिम भने कम हुने गर्दछ। लगातार बढिरहेको प्रदूषण र गलत खानपानले पनि फोक्सो निम्त्याउन सक्छ।
फोक्सोको क्यान्सरका संकेतहरु कसरी पहिचान गर्ने ?
अनावश्यक थकित हुनु
कफ र रगतसहितको खोकी
श्वास प्रश्वासमा समस्या आउनु
छातीमा असह्य पीडा
अचानक भोक लाग्न छोड्नु
जोर्नी तथा हड्डीहरु दुख्नु
अनुहार र घाँटी सुन्निनु
फोक्सोको क्यान्सरको सही उपचार
फोक्सोको क्यान्सरका चार प्रकारका हुन्छन्। जुन एडेनोकार्सिनोमा, स्क्वामस सेल क्यान्सर, लङ सेल कार्सिनोमा र नन (स्मल सेल फोक्सोको क्यान्सर हुन्। यसको उपचार क्यान्सरको स्टेज र यसको प्रकार हेरेर गरिन्छ। पिडितको स्टेज र प्रकार हेरेर उनीहरुलाई उचित रेडिएशन, कीमोथेरेपी, सर्जरी वा टारगेटेड थेरापी दिने गरिन्छ।
क्यान्सरको जोखिमबाट कसरी बच्ने ?
प्रदूषणबाट सकेसम्म जोगिने , वातावरणलाई सफा र स्वस्च्छा राख्न बोट बिरुवाहरु लगाउने दैनिक पानीको सेवन उचित मात्रामा गर्ने, पानीको सेवन सहि तरिकाले गर्दा शरीरमा भएका सबै विषाक्त तत्वहरु बाहिर निस्किन्छन्।
आहारमा हरियो तरकारी, जुस, मौसमी फल, नरिवल पानी, जडिबुटीहरू खाने । यसले फोक्सोलाई सफा र डिटक्स गर्न मद्दत गर्दछ र क्यान्सरबाट जोगाउँदछ।
घरमा सकिन्छ भने एयर प्युरिफायरको प्रयोग गर्ने यसले हावालाई दुषित हुन दिँदैन घर वा आफ्नो निजी सवारीलाई सफा गर्दा रसायनयुक्त उत्पादनहरुको प्रयोग नगर्ने, इको फ्रेण्डली उत्पादनहरुको प्रयोग गर्दा स्वास्थ्यलाई लाभ हुनुका साथै वातावरण पनि स्वच्छ हुने गर्दछ।
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको धूमपान, मदिरा, सुर्तिजन्य, ई–सिगरेट र अन्य यस्ता पदार्थहरूबाट सकेसम्म टाढा रहनु होला।
फोक्सोलाई सफा र डिटक्स गर्ने केहि घरेलु उपचार
– एक ग्लास पानीमा तुलसीको पात, मरिच, ल्वाङ, अदुवा, दालचिनी र सुकमेल उमालेर दिनमा दुईपटक पिउनुहोस्, यसले गर्दा फोक्सो सफा हुनुका साथै फोक्सोलाई डिटक्स गर्न पनि मद्दत गर्दछ।
– तोरी तेलमा खाने कपूरलाई मिलाई छातीको मालिस गर्दा यसले फोक्सोलाई स्वास्थ्य राख्दछ ।
– फोक्सोलाई स्वास्थ्य राख्न लसुन, अदुवा, धनियाँ, पुदिना, मुलेठी, मह, अनार अधिक मात्रमा सेवन गर्नुहोस् ।
– दैनिकरुपमा सक्खरमा प्याजको रसलाई मिलाएर पिउनुहोस, यसले फोक्सोलाई स्वास्थ्य राख्नुका साथै छाती तथा गलामा कफ पनि हुन दिदैन् ।
– दैनिकरुपमा १ कप ग्रिन टिको सेवनले फोक्सोमा संक्रमण हुन नदिइ क्यान्सरको जोखिम पनि कम गर्दछ।
श्रावण २८, २०७७ बुधवार १९:१३:११ बजे : प्रकाशित
# फोक्साको क्यान्सर
# Lungs Cancer
क्यान्सरदेखि मुटुरोगसम्मको लागि उपयोगी हुन्छ कालो तोरी
काठमाडौँ। तोरी वा कालो तोरी हरेक नेपालीहरुको भान्छामा पाइने एक प्रकारको मसला हो। यसको प्रयोग तेलको उत्पादन गर्न देखि लिएर मसलाको रुपमा अचारको स्वाद र खानाको स्वादसम्म बढाउन प्रयोग गरिन्छ। यसमा पाइने विभिन्न गुणहरुका कारण यो एक प्रकारको औषधी मुलक वनस्पति हो। तोरीमा पाइने विशेष पोषक तत्वको कारण यसले क्यान्सरदेखि हृदयरोगसम्मको लागि उपयोगी हुने गर्दछ।
जानिराखौं तोरीका १० अचुक फाइदा
आश्विन ८, २०७७ बिहिवार १९:१३:२२ बजे : प्रकाशित